Ny vokatry ny fandavana ny fisalasalana amin'ny fombanao sy Descartes - Raby Michael Avraham
Ny vokatry ny fandavana ny fisalasalana amin'ny fombanao sy Descartes
Responsa > Sokajy: Jeneraly > Ny vokatry ny fandavana ny fisalasalana amin'ny fombanao sy Descartes
misaina Nanontany 2 taona lasa izay
Te-hanontany momba ny zavatra hitako tao amin'ny tranokalan'ny Repentants aho,
Misy ilay fanontaniana fanta-daza nataon'i Kant hoe tsy misy ifandraisany amin'ny subjective sy izao tontolo izao mihitsy ary toa tsotra izany, dia mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana no ahafahantsika matoky ny fiheverantsika fa misy fifandraisana eo amin'izao tontolo izao sy ny olombelona. Tsy azo atao rahateo ny manome porofo toy izany satria efa nifanena tamin’ny fanontaniam-panontaniana foana isika, saingy toa izay tsy misalasala ihany no manaiky fa tsy tokony hitondra porofo ny vinavina fototra ary indrindra fa io no famaritana azy ho toy ny porofo. axiom.
Dia mba te hanontany aho hoe, ny fiheverana mivadika hoe izay rehetra tsy misy antony ve dia mampametra-panontaniana, ny tenany ve dia fiheverana?
Raha izany no izy dia toa manana adidy amin'ny fahazoana antoka isika amin'ny petra-kevitra fototra, fa raha ny fantatra dia tsy eken'ny raby izany fa soloiny amin'ny antonony ny fahatokisana, fa izay no mifanaraka amin'ny tantara? Ny tena mety hisian'ny probabilité dia mihevitra fa manaiky ilay filazana misalasala ianao tsia?
Ary koa, indray mandeha aho dia nametraka fanontaniana momba an'i Descartes izay toa tsy azony daholo izany rehetra izany, fa noho ny porofo ontolojika miampy fa mahay mamaha ny olana Andriamanitra, fa ahoana no niheverany an'izany. objectif ve?
Tsy azoko antoka fa azoko ilay fanontaniana. Na izany aza dia haneho hevitra kely aho amin'izay nolazainao:
Tsy milaza i Kant fa tsy misy ifandraisany ny fomba fijerintsika sy izao tontolo izao. Azo antoka fa misy fifandraisana, ary bebe kokoa ny fomba. Milaza fotsiny izy fa ny sary hitantsika dia zavatra tonga saina. Saingy maneho ny fisehoan-javatra eo amin'izao tontolo izao mihitsy izy. Ohatra, ny onja elektromagnetika eto amin'izao tontolo izao dia mandika ho hazavana ao amin'ny fahatsiarovantsika. Tsy misy ifandraisany ve izy ireo? Mazava ho azy fa misy fifandraisana. Ny hazavana dia fanehoana an-tsary ny onjam-peo elektromagnetika.
Misy fanontaniana mipetraka amin'i Kant, dia avy aiza no ahafantarany fa misy izao tontolo izao ao aminy raha toa ka ny phenomena (ny phenomena cognitive) ihany no azo idirana. Heveriko fa vokatry ny fitsipiky ny causality izany, izay fitsipika priori. Avy amin'io fitsipika io dia manaraka fa raha misy trangan-javatra mahatsiaro tena dia tokony hisy zavatra eto amin'izao tontolo izao mahatonga izany.
Tsy azoko ilay fanontaniana momba ny zavatra tsy misy antony. Mieritreritra ny hanontany ve ianao raha misy zavatra tsy misy antony? Amin'ny ankapobeny dia azo atao ny eny, fa ny fitsipiky ny causality dia mihevitra fa tsy. Ao amin'ny teoria quantum, ohatra, ny fifandraisana misy eo amin'ny antony sy ny vokany dia tsy mitovy ary tsy tena misy akory amin'ny heviny mahazatra.
Afangaronao ny antoka sy ny fahamarinana. Heveriko fa tsy misy zavatra azo antoka fa tsy misy ifandraisany amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fomba rehetra.
Mifanohitra amin'ny antonony ny fisalasalana. Ny misalasala dia mihevitra fa ny fahatokiana ihany no manome ny fahamarinana, toy ny mivoaka avy amin'ny zavatra lazainao. Diso hevitra anefa ianao momba izany.
misaina Namaly 2 taona lasa izay
Misaotra betsaka amin'ny fanehoan-kevitra sasany azoko dia hiezaka aho hanazava ny ampahany tsy azoko.
2. Nanontany an'io hevitra io koa aho. Na iza na iza tsy misalasala dia toa manaiky fa tsy maintsy misy ifandraisany amin'izao tontolo izao sy ny trangan-javatra (hoy ny maso sy ny hazavana ao amin'ny Doge 1), fa raha ny fahatsiarovan-tenantsika rehetra dia miorina amin'ny principe priori ihany ho toy ny causality dia mbola mety ho. nadika noho ny antony tsy tambo isaina ny fomba namoronana ny fahatsapana avy amin'ny saina, na dia i Descartes aza dia antony iray amin'io heviny malalaka io; Saingy ny ankamaroantsika dia tsy mihevitra fa izany no antony mety. Raha izany no izy dia toa tsy ampy ny principe de causality irery fa mila zavatra hafa na dia mazava ho azy fa toa any ambadika any.
3. Tsy resaka zava-niseho na azo ampiharina no tiako tenenina, na dia mazava ho azy fa misy ifandraisany, fa indrindra momba ny vinavina sy ny filazana, ohatra, ny famaritana ny assumption dia tsy misy antony. Heveriko fa amin'ny alalan'izany ihany no azo inoana, amin'ny karazana fiheverana fa Andriamanitra no vatofantsika misy ny antony eto amin'izao tontolo izao. Saingy raha tsy misalasala isika amin'ny fiheverana, ahoana no ahafahantsika milaza fa misy zavatra tsy azo antoka nefa manana refin'ny antonony ihany koa? Rehefa dinihina tokoa, ny fiheverana rehetra momba ny fahamendrehana dia mihevitra any aoriana fa azo anontaniana izany.
3. Etsy an-danin'izany koa, ny misalasala amin'ny fomba fanaony dia vonona tokoa ny hisalasala ny vinavina, fa raha izany, dia afaka misalasala ihany koa izy amin'ny fiheverana fa tokony hametra-panontaniana ny fiheverana na ny zavatra tsy misy antony dia diso. Raha eny, toa manapaka ny rantsany ve izy? Tsia?
5/4 ny tiako holazaina dia 3 Risha.
3. Mampiasa ny teny hoe "antony" amin'ny fomba tsy azoko ianao. tsiro / fisainana ve no tianao lazaina?
Tena tsy misy fototra ho an'ny petra-kevitra. Saingy tsy marina ny hoe tsy misalasala aho ny fiheverana. Tsy misy filazana, eritreritra na fehin-kevitra azo antoka amiko.
Rationalista Namaly 2 taona lasa izay
Eny tokoa ny tiako holazaina amin'ny lafiny antony / tsiro.
Voalohany, momba ny 2 dia manaiky ve ianao fa manana petra-kevitra fotsiny isika fa marina ny zavatra hitantsika? Satria toa tsy ampy ho an'ny principe apriori iray ny hoe afaka * irery * mankeo amin'ny fanekena ny tontolo ara-materialy.
Ka raha eny, ahoana no ahafahanao mahazo petra-kevitra nefa amin'ny fomba tsy azo antoka? Io no tena tsy mazava amiko.
Ary na dia lazainao aza fa azo atao izany, mifandraika amin'ny inona no tsy azo antoka? Momba ny antso hafa na fisalasalana hafa? Azo inoana fa io fisalasalana io ihany koa dia hihevitra fa misy fanazavana fototra iray hafa, ary izy, na voalohany indrindra, ny rafitra fanazavana fototra dia axiomatic. Saingy midika fotsiny izany fa tsy toy izany ny fiheverana noheverinay fa première, fa fehin-kevitra avy amin'ny zavatra fototra kokoa.
Raha tsy hoe misalasala ianao ary milaza fa azo anontaniana ny fiheverana, fa aiza no mety amin'ny sary? Satria ny zava-drehetra ho azy dia mitovy daholo. (Ary ny fiheverana fa tsy misy dikany ny zava-drehetra dia tsy misy dikany ...)
Ary raha izany no izy, raha ny filazanao momba ny fisalasalana dia tsy misy validité ihany koa ny hoe misy zavatra toa mitombina amiko, satria ny probabilité rehetra dia eo amin'ny haavon'ny reasonablement sujet ihany fa tsy misy ifandraisany amin'izany sy ny tontolo objectif ary tsy azo tetezana na oviana na oviana ho savaranonando.
Ary raha tsy misalasala ianao, dia tsy manontany eritreritra akory ianao…
Ny mpanelanelana farany Namaly 2 taona lasa izay
"Ny onja elektromagnetika eto amin'izao tontolo izao dia midika ho hazavana"
Ny onja dia mandika ho famantarana neuronal. Mandika amin'ny zavatra hafa Mandika amin'ny zavatra hafa… Na ahoana na ahoana amin'ny farany dia misy hazavana.
Tsy misy fifandraisana mivantana eo amin'ny hazavana sy ny onja. Ny contexte dia tena tsy mivantana.
Very anao tanteraka aho. Afangaronao ny firaisana amin'ny tsy firaisana ara-nofo hatrany, ary tsy resahinao izay novaliako. Efa novaliako daholo.
Arbitrator, fifandraisana mivantana izany. Ny iray mahatonga ny iray hafa, na dia amin'ny alalan'ny fanelanelanana amin'ny dingana maromaro aza. Rehefa disassemble ny lalana eo anelanelan'ny fanosehana ny lalao sy ny fandrehetana ny afo dia ho hitanao eo ny sasany dingana manelanelana. De maninona? Ny iray mahatonga ny iray hafa. Nafam ve raha misy dingana mpanelanelana? Ary ny momba ny herin'ny heriny ve no resahinay?
Mamaly ny fahaverezana Namaly 2 taona lasa izay
Raha very aho dia ahoana no navalinao?...
Ny tsy mazava amiko dia iaraha-mahalala fa ny famaritana ny première dia tsy misy antony hifotorana azy.
Fa raha izany no izy, ahoana no ahafahana mametram-panontaniana ny petra-kevitra iray raha tsy mampiasa petra-kevitra manokana? Araka ny nolazainao dia manao izany ianao.
Ka amin'ny lafiny iray dia azonao fa azo anontaniana ny fiheverana ka ahoana no hiheveranao fa misy zavatra azo inoana kokoa? Rehefa dinihina tokoa, azonao atao koa ny mametraka fisalasalana bebe kokoa momba izany fahatsapana mety izany…? Ary noho izany dia mitombina ny fanatsoahan-kevitrao hoe sulfist. Na ianao hisalasala ny fiheverana fa afaka misalasala ianao dia ho tafahitsoka.
Saingy tsy maintsy lazaina fa eo am-piandohan'ny fisainana dia misy fiheverana * azo antoka * fa ho kely toy izany.
Ohatra ny fiheverana fa izay heverintsika fa mitombina dia tena objectif (na dia tsy izany aza dia tsy voatery hoe objectif). Satria manomboka eo ihany no azo lazaina fa mety ho mpiasa, sns. Fa raha milaza ianao fa tsy manana isan-jato na oviana na oviana ny fiheverantsika rehetra misy fisalasalana ao anatiny, dia tsy maintsy miforona izany fisalasalana izany aorian'ny filazana fisalasalana izay ivelan'izy ireo, ary na dia be fisalasalana aza ianao dia tsy afaka milaza mihitsy hoe misy zavatra. mitombina araka ny tokony ho izy…
Dia tiako ny milaza fa manaiky koa ianao fa misy primitif ny fombanao fa tsy hoe plausibility fotsiny. Na azo antoka ny mety.
Na izany na tsy izany, raha marina ny hevitro dia ny mahafinaritra ny mijery dia aleonao postmoderniste toy izay fundamentalist 😉
Ary na dia tsy misy porofo azo resahina aza, Namaly 2 taona lasa izay
Ary na dia tsy misy porofo azo resahina aza, dia misy soritra fitenenana ao amin’ny sasin-tenin’ny kahie momba ny finoana:
"Raha ny fahalalako azy, ny olona iray dia tsy manana fahafahana hahazo antoka amin'ny sehatra rehetra." Raha nahita fomba hahazoana antoka toy izany izy dia mety ho diso (azo antoka! 🙂). ”
Midika izany fa misy zavatra azo antoka sy fototra ao am-pon'ny fisainantsika amin'ny faran'ny andro izay milaza fa misy ny fandrindrana eo amin'ny fahaiza-mandanjalanja sy ny tontolo hafa dia tsy maintsy voaozona ho amin'ny fisalasalana.
Valio fa very anao aho izao (inona no tadiavinao ankehitriny) satria efa novaliako ny zava-drehetra taloha.
fipetrahana? Namaly 2 taona lasa izay
Moa ve ny fomba fanaonao dia tsy maintsy manana foto-kevitra (na voafetra ihany aza), izay horaisinay amim-pahatokiana fa tsy noho ny antonony fotsiny.
Ary heveriko fa io petra-kevitra io dia hoe izay toa mitombina amintsika dia mitombina tokoa ary misy ifandraisany amin'izany. Amin'izany fomba izany ihany no heveriko fa azo atao ny manamarina ny fanontaniako fa tsy latsaka amin'ny fisalasalana tanteraka ary etsy ankilany ny tsy filazana fa azo antoka ny zava-drehetra.
Amin'ny lafiny iray, ianao dia nilaza voalohany fa tena "misalasala ny vinavina fototra. Tsy misy filazana, eritreritra na fehin-kevitra azo antoka amiko. "
Fa raha tena tianao ny zavatra nosoratanao dia tsy maintsy manana fahaizana manavaka hoe inona no petra-kevitra marina na tsia (satria tsy misalasala ianao...), Karazana première ihany koa anefa io fahaizana io ka hisalasala ianao ary hamerina izany. ary avy eo dia tsy maintsy misalasala ianao.
Heveriko fa tsotra ireo zavatra ireo, saingy satria hitako fa ianao no filozofa faharoa milaza zavatra mitovy amin'izany rehefa samy milaza ny tenanareo ho tsy postmodernista aho dia te hijery raha marina tokoa ny teniko na tsy maranitra ny teniko. Ary afaka mihinana ny mofomamy ianao ary mamela azy manontolo.
Satria manaiky ihany koa izy fa tsy misy ifandraisany ny fiheverana sy ny fahavononany eto amin'izao tontolo izao araka ny voalazan'i Kant ary tokony hanontany ny rehetra, fa amin'ny olana hafa dia misy fehin-kevitra mitombina… Tsy ny filazanao marina izany fa amin'ny farany dia mitovy amin'ny hetsika. Efa narosoko teto.
Mamaly fanintelony aho hoe: tsia. Tsy misy azo antoka eo imasoko. Ary averiko fanintelony ny tsy fahatokisana fa tsy fisalasalana. Ny fisalasalana dia midika fa ny toerana sasany dia tsy tsara kokoa noho ny mifanohitra amin'izany. Ny tsy fahatokisana kosa dia midika fa tsy azoko antoka.
tovovavy iray Namaly 2 taona lasa izay
Ary ahoana ny momba ny tsanganana geometrika izay mirona amin'ny 0. Nisy zavatra toa nety tamiko. Ara-dalàna eo imasoko fa izay toa mitombina amiko - dia mitombina. Ara-dalàna eo imasoko fa mitombina izay heveriko fa mitombina. Ahenay ho 99.99% ny mety ho azo antoka ary ny fitakiana tsirairay dia hihodina amin'ny fetran'ny antoka 0%.
Nosoratako izay azoko tamin’ilay fanontaniana. Satria raha ny valiny dia hoe "misy zavatra toa mitombina amiko" rehefa apetrakay amin'ny 99.99 izany dia 99.99 izany aorian'ny kaonty rehetra eto amin'izao tontolo izao, ary izany dia fitakiana mivantana amin'izao tontolo izao fa tsy fitakiana momba ny tenako - dia izahay. mamaritra ny fifandraisana mafy eo amin'ny antonony sy ny fahatokisana amin'ny fahatokisana.
Tsy azo tanteraka Namaly 2 taona lasa izay
Ahoana no namoronana ny fahagagana izay tsy misy antoka fa tsy mitondra any amin'ny fisalasalana?
Satria ny hevitra iray manontolo momba ny tsy fahatokisana sy ny mijanona ho mitombina dia mihevitra fa misy safidy faharoa, saingy tsy manana fahaizana manombana izay mitombina ianao satria fiheverana iray hafa izay hanontanianao ihany koa raha mitombina izany…
Ity fahagagana mahagaga ity dia mipetraka amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny 90% mena sy ny fisalasalana 50% (raha miziriziry amin'ny fandrefesana isika). Na dia tena mahagaga sy tsy takatry ny saina aza izany dia mbola mety hitranga ihany. Mihodinkodina goba enina tapitrisa aho. Azoko antoka fa hozaraina mitovy ny vokatra ary hisy vokatra eo amin'ny iray tapitrisa eo ho eo isaky ny wig. Misy fisalasalana kely aho (tsy 100%) fa mbola izao no mety hitranga. Mahagaga.
Ary manana fahaizana manombana intuitively ny lanjan'ny intuition koa aho. Ity circularity ity dia tsy misy dikany. Tahaka ny manontany hoe ahoana no ahafantaranao fa marina ianao, ianao no manapa-kevitra hoe marina ianao. Inona no maha samy hafa izany amin'ny tohan-kevitra misalasala mahazatra?
Tena reraka mihitsy ireo quibbles ireo hatramin'ny fandatsahan-dra.
Inona no ifandraisan'izany sy ny tohan-kevitra misalasala tsotra. Eto dia tsy manontany hoe "ahoana no ahalalanao" fa manaiky daholo izay lazain'ilay olona fa ny fombany ihany no resahina. Raha milaza izy fa azo antoka zato isan-jato fa marina ny zavatra iray, ary azony antoka zato isan-jato koa fa amin'ny tranga izay matoky zato isan-jato izy fa marina ny zavatra iray dia zato isan-jato fa marina ny zavatra iray - dia tsara ny zava-drehetra satria ny iray manana na inona na inona dia iray ihany. Fa raha toa ka tsy misy afa-tsy ny mety, dia ny faribolana miverimberina dia mihamalalaka ho aotra. Tena tsotra. Na izany na tsy izany dia toa tena azo inoana fa tsy misy olona eto amin'ny tranokala afa-tsy ianao izay mahay mamaly izany. Ary na dia manana valiny marani-tsaina aza ianao dia tsy hahita izany eto amin'ny kofehy. Toa meloka ny SAG ary nivadika ho valiny sy valiny.
Manantena aho fa takatro taloha Namaly 2 taona lasa izay
tokoa. Ekeko fa tsotra be izany ka amin'ny farany ny fahaizana manombana ny intuition mihitsy dia petra-kevitra tsy maintsy ekenao amin'ny * azo antoka *, na dia ao anatin'ny intuition aza dia misy ny mety ho tsy azo antoka, fa tsy avy amin'ny mpamatsy ivelany, fa ny * anatiny * fisalasalana Ampahany amin'ny famaritana ity toerana ity, ny zava-dehibe indrindra fa misy singa iray eto azo antoka.
Zava-dehibe io teboka io satria tiako ho azo antoka fa marina tokoa ireo zavatra toa tsotra tamiko ireo. Satria araka ny nolazaiko tany am-boalohany dia misy olona manan-danja izay filozofa toy izany koa izay mandà tanteraka an'io hevitra io nefa manamafy etsy ankilany fa tsy misalasala amin'izay toa tsy azo inoana tanteraka.
Ary noho izany mandritra ny fifanakalozan-kevitra eto dia toa mandeha amin'ny fombany ihany koa ianao, ka tsy hitako hoe ahoana no ahafahana mamokatra io fahagagana io ary indrindra amin'ny fahafantarako anao teo aloha fa fisalasalana ivelany amin'ny petra-kevitra io dia misy fanontaniana mipetraka. fa maninona no fisalasalana 10% fotsiny fa tsy fisalasalana 50% metodolojika. Fa hitako fa manaiky ny fomba nasehoko teto ianao.
Marina tokoa fa ny Shabbat dia nanolotra fanazavana izay manazava ny filozofa iray ihany amin'ny fampiasana ny fampidirana fanazavana tsy manam-petra izay na dia mila fanazavana aza ny fanazavana rehetra dia mbola mitondra lanja kely, amiko manokana dia toa manahiran-tsaina tanteraka raha azo atao izany. Fa io ihany no nahitako azy.
Ity fanontaniana ity dia manan-danja ihany koa amin'ny fanoheranao ny fitakiana fundamentalista amin'ny lafiny iray ary ny mety hisian'ny tsy fahatokisana amin'ny lafiny iray. Saingy azonao atao ny milaza fa karazana tatoazy izany. Na dia heveriko aza fa manatsara ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpamatsy ivelany (PM) sy ny mpamatsy anatiny (ny fomba synthetic anao).
Tsia, tsy azo antoka izany. Tsy azo antoka koa izany.
manorisory Namaly 2 taona lasa izay
Ekenao ve ny fahasamihafana misy eo amin'ny filazanao fa ny fiheverana fototra dia mitoetra ao amin'ny fiheverana tsy azo antoka, ary ny fisalasalana izay ivelan'ny fiheverana fototra? (Avy eo ianao dia mahazo rafitra fanaraha-maso hafa ho toy ny fototra, na voaheloka ho misalasala).
Raha tsy izany dia tena tsy azoko mihitsy hoe ahoana no tsy hisalasalanao raha misalasala amin'ny vinavina ianao na dia amin'ny isan-jaton'ny isan-jaton'ny tsirairay aza (raha mbola tsy ao anatin'ny fiheverana iray ihany no tsy azo antoka).
Raha ny fahitako azy dia toa misy fahasamihafana eto ka tsy azoko angamba satria raha tsy araka ny voalazako dia tsy azoko tanteraka ny filazanao fa tsy misalasala ianao. Angamba azonao hazavaina io teboka kely io.
Tena tsy azoko hoe aiza ny olana eto. Zavatra tsotra sy mazava no lazaiko. Tsy azo antoka ny eritreritro eo imasoko. Tsy hoe maneso ry zareo fa tsy azoko antoka hoe marina (misy safidy azo atao). Tsy fantatra hoe inona ny fisalasalana ivelany. Misy fisalasalana kely aho amin'ny eritreritro. dia izay.
izao azoko? Namaly 2 taona lasa izay
Fisalasalana ivelany Ny fikasana dia ny fisalasalana dia avy amin'ny toerana ratsy ho karazana saro-takarina ivelany amin'ny fisainana fa tsy misy ao anatin'ny foto-kevitry ny fisainana izay ohatra milaza fa marina amin'ny 90% amin'ny tranga.
Fa raha vao nanoratra ianao hoe: "Tsy azoko antoka ny hevitro." "Satria tsy azoko antoka raha marina izy ireo (misy safidy azo atao)." Noho izany dia toa mpamatsy ratsy mihitsy izany ary raha izany dia azonao atao ny mamerina azy indray:
Satria midika izany fa misy "ianao izay mahamarika" ary raha ivelany amin'izy ireo ianao dia mijery ny fiheverana. Azonao atao, ohatra, izany ao amin'ny fanoharanao momba ny mason'ny saina izay mijery hevitra lavitra.
Fa raha izany, dia tsy maintsy manaiky ianao fa ianao no manavaka (= maso?) ny tenany amin'ny fahatokisana tanteraka ny fahaizany manavaka ny fiheverana fototra ka na dia tsy azonao aza ny haavon'ny fahitsiana azy dia tsy maintsy feno tanteraka. Ekeo amin'ny fomba azo antoka fa manana haavon'ny fahitsiana izy ireo. Ary ny mason-tsivana sasany toy ny halaviran'ny hevitra, ny filana sy ny maro hafa. Ka raha mankany amin'io ambaratonga io ianao dia tsy misalasala mihitsy fa na ny tsy fahatomombanana ao aminy aza dia raiki-tampisaka ao amin'io toerana io.
Fa raha mametraka fisalasalana ratsy amin'izy ireo indray ianao:
1. Dia tsy ho afaka hiala amin'ny tsingerin'ny fisalasalana mihitsy ianao. 2. Tsy misy antony tokony hiheverana fa 10% fotsiny ny habetsahan'ny antontan'isa omena fa tsy 50%. Ary izany dia efa fisalasalana tanteraka 3. Izany dia hitarika amin'ny fisalasalana izay hanaiky ianao amin'ny farany fa ny fahamarinan'ny fahamarinan'ny hevitrao dia mirona ho aotra amin'ny hamaroan'ny probabilities. 4. Azonao atao ihany koa ny manontany ny fitsipiky ny fanariana fisalasalana.
Miaraha misoratra anarana 3,089 fanampiny
Foibe ao amin'ny vatana misy fetra telo
Ny 'lehibe' dia nilaza fa ny mpitantana izay mifindra amin'ny atidoha dia ho very ny tontolony manaraka. Tena matotra ve izany?
Soso-kevitra: Boky momba ny famakafakana hevitra
Ny halatra fakan-tsary amin’ny fifidianana
Ny adihevitra momba ny cosmological sy ny big bang
Dr. Patricia Marie On Amin'ny marika sy fifanakalozan-kevitra, na: Epikoreana ve aho? (Tsanganana faha-74)
AA On Ny valin'ny 'lehibe' dia nilaza fa ny mpitantana izay mifindra amin'ny atidoha dia ho very ny tontolony manaraka. Tena matotra ve izany?
Vava sabatra On Valiny ny tohan-kevitry ny cosmologique sy ny big bang
A' On Valiny amin'ny soso-kevitra: Boky momba ny famakafakana hevitra
Manana olana amin’ny tonia mpampanoa lalàna koa izy On Valiny ny tohan-kevitry ny cosmologique sy ny big bang